📣 Vaovaon’ny faritra : Alaotra Mangoro , ZEI Moramanga
Tontosa ny 24 sy 25 Febroary lasa teo ny iraka fanentanana mikasika ny « Zone d’Emergence Industrielle » na ny #ZEI any Ambohibary izay notarihin’ny Tale Jeneralin’ny Indostria eto anivon’ny MICA tany Ambatondrazaka.
Ny fihaonana tamin’ireo manam-pahefana isan-tsokajiny tany amin’ny faritra Alaotra Mangoro toy ny Governora sy ny lehiben’ny prefektiora Ambatondrazaka dia nahafahan’ny delegasionan’ny #MICA nitondra fanazavana bebe kokoa momba ny tetikasa ZEI Ambohibary Moramanga.
Ity tetikasa ity moa raha tsiahivina dia nambaran’ny Filoha Andry Rajoelina nandritra ny fetin’ny fahaleovantena maorisiana tamin’ny taon-dasa. Marihina fa midadasika hatramin’ny 680 Ha ilay ZEI ka ny 80 Ha dia hatokana ho an’ny sehatra lamba (secteur textile) manaraka ny sata mifehy ny orinasa afaka haba (#ZEF), lalàna 2007-037 ny 14 Janoary 2008.
Ity tetikasa ity dia natao hitondra fampandrosoana ho an’ny mponina ao amin’ny faritra Alaotra Mangoro noho izy mamorona asa miisa 30 000 eo ho eo ka mpiasa eny toerana avokoa no tadiavina amin’izany ary hantenaina ny fihenan’ny asa jiolahy eny an-toerana araka izany. Ireo manam-pahefana any an-toerana dia naneho ny fahavononan’izy ireo tanteraka ny hiara-hiasa amin’ny MICA mandritra ny fitohizan’ny tetikasa izay mitondra fampandrosoana #indostrialy any amin’ny faritra Alaotra Mangoro.
Dingana arahina amin’ny fametrahana indostria
📣 Vaovaon’ny faritra : Fihaonana tamin’ny mpanao asa tanana Alaotra Mangoro